Xildhibaan horre cabdibarre oo dhaliilay laamaha amaanka Dowladda Federaalka (dhegayso) – Radio Daljir
Nofeembar 10, 2018 9:55 g 0
Xildhibaan horre Cabdibarre jabriil horeyna usoo noqday xildhibaan Barlamaanka somaaliya ayaa ka hadlay xaladda siyaasadeed ee dalka iyo faragalinta lagu hayo maamul gobaleedyadda iyo amaanka Caasimadda Muqdisho.
Cabdibarre jabriil oo waraysi siyeey Caaawa Radio daljir ayaa sheegay in wax laga xumaado tahay in caasimadii muqdisho ay kadhacaan qaraxyo isdaba joog ah ,iyaddo Muqdisho ay jogaan Ciidamadda AMISOM iyo Booliska Dowladda in qaraxyo lagu gumaado shacabka Maalin cad.
Qaraxyadii shalay Muqdisho kadhacay gaar ahaan Hotel saxafi ayuu sheegay in ay dad shacab ah ku dhinteen,lamaaha amaankana ay ku mashquulsanayen arrosyo iyo xafladdo.
Faragalinta lagu hayo dowladd gobaleedyadda ayuu Cabdibarre si kulul uga hadlay,isago sheegay in burburinta dowlad gobaleedyadda inta lagu mashquulsanyahay uu faraha kabaxay amaankii dalka.
Aqoonyahan Cabdiwahaab sheekh oo daljir uga waramay isbadalka Siyaasadda Geeska (dhegayso)